Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihi UNPO oo Geneva ka furmay iyo wafdigii JWXO uga qayb galay.
Shirweynihi UNPO oo Geneva ka furmay iyo wafdigii JWXO uga qayb galay.
Posted by ONA Admin	/ November 30, 2012
Waxaa taariikhdu markay ahayd 29.11.2012 si rasmi ah ugu furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland shirweynihi ururka UNPO kaas oo lagu wado in uu socdo ilaa 1.12.2012.
Shirkaas oo ay ka soo gayb galeen shucuub badan oo xornimo doon ah iyo kuwo raadinaya xuuqudoodaba waxaa si rasmi ah u furay guddoomiyaha UNPO ( Unrepresented nations and peoples organization) Mudane Choephel iyo xoghayaha guud ee ururka Mudane Marino Busdachin oo soo bandhigay waxqabadki ururka ee sanadki tegay.
Qaybti labaad ee shirka ayaa waxaa warbixino soo jeediyey wufuudi kala duwanayd ee madasha isugu timid ayagoo daahfuray xaaladaha ay shucuubtoodu ku sugan yihiin, rajooyinka mustaqbalka iyo khibradihi laga dhaxlay dhacdooyinki la soo maray.
Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenya waxaa shirkaas ooga qayb galay wafti u hoggaminayo agaasimaha guud ee hoggaanka arrimaha dibedda(HAD) Mudane Axmed Gurxan oo halkaas ka jeediyey khudbad dheer oo uu uga warbixinayo marxaladda uu marayo halganka Somalida Ogadenya.
Waftiga JWXO waxay gudbiyeen dhacdooyinki ugu dambeeyey ee soo maray Ogadenya, sida xasuuqa iyo bahdilka joogtada ah ee ka socda Ogadenya , wadahadaladi dhex maray Jabhadda iyo xukuumadda Itoobiya, waxayna qeexeen in xaqa aaya ka talinta ee shacbiga Somaalida Ogaadenya uu yahay lagama gudbaan, hase yeeshee albaalka nabaddu uu mar walba furan yahay.
Shirka oo sii socon doona laba maalmood wixi ka soo kordha dib ayaan idiinka soo gudbin doonaa.